Izinzuzo ezi-4 ze-Micro-Influencers | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoJuni 1, i-2018 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Njengoba ukumaketha okunomthelela kukhula futhi kuguquka, izinhlobo manje sezazi kakhulu kunanini ngaphambili ngezinzuzo zokukhulisa imiyalezo phakathi kwezithameli ezihlosiwe ezincane. Sabelane nge ukuqhathanisa (i-macro / mega) influencers kuqhathaniswa nabathonya abancane phambilini:
(Macro / Mega) Umthelela - laba ngabantu abafana nosaziwayo. Banokulandela okukhulu futhi bangathonya ukuthenga, kepha akunjalo embonini ethile, umkhiqizo, noma insizakalo.
I-Micro-influencer - laba ngabantu abangase babe nabalandeli abaphansi kakhulu, kepha bazibandakanye kakhulu futhi banethonya elikhulu kubalandeli abanabo. Isibonelo kungaba nguchwepheshe wokuthengisa izindlu nomhlaba olandelwa ngabenzeli abaningi.
Abathonya abancane nikela inhlanganisela ephelele yokusondela, ukwethembeka, ukuzibandakanya, nokufinyeleleka futhi ngokungafani nalokho okwenzeka ngabathonya abakhulu nabadumile, okuqukethwe abakukhiqizayo kuzwelana nabalaleli babo ngoba kuyabusiseka.
I-infographic, eyenziwe iklayenti lethu, inkundla yokumaketha ethonya I-SocialPubli.com, Iqokomisa izinzuzo ezine ezibalulekile zokusebenza nalokho okubizwa ngokuthi 'umsila omude' wokukhangisa okunomthelela:
Ama-Micro-Influencers athembekile kakhulu - banolwazi futhi bayayithanda i-niche ethize abayihlanganisayo, futhi ngenxa yalokhu, babonwa njengochwepheshe nemithombo ethembekile yolwazi.
Ama-Micro-Influencers athola ukubandakanyeka okuphezulu - okuqukethwe okwenziwa ngabathonya abancane kuthinta izethameli zabo ngoba kuyachazeka. Ucwaningo lukhombisa ukuthi njengoba isibalo sabalandeli sanda, amazinga okubandakanya ayancipha
Ama-Micro-Influencers aneqiniso elikhulu - ngoba banesifiso sangempela ku-niche yabo, abasebenza ngokuthonya abancane bakhiqiza okuqukethwe okwenziwe kwaba ngokwakho futhi okuyiqiniso.
Ama-Micro-Influencers abiza kakhulu - Abashushisi abancane bathengeka kakhulu kunosaziwayo noma ama-mega-inflencers anezigidi zabalandeli.
Tags: ukumaketha kwamathonyaAbathonyaukuthonya okukhuluithonya megaukuthonya okukhulu megaukuthonya okuncaneeyokuziyomphakathi.com